Logo အမျိုးအစား (၇)မျိုး - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.Logo အမျိုးအစား (၇)မျိုး - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Logo အမျိုးအစား (၇)မျိုး
လိုဂိုဒီဇိုင်းဆိုတာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ပါ။ ဒီလို လုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့ အဓိကကိုယ်စားပြုအမှတ်တံဆိပ် လိုဂိုတွေကို ရှေးခေတ် ဂရိလူမျိုးတွေကနေ စတင်တီထွင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားအနေနဲ့ (၇)မျိုး ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
1. Letter-mark logo (Text Logo)
စာလုံးတိုများဖြင့် အသုံးပြုရေးဆွဲခြင်း၊ အထူးသဖြင့် Company နာမည်ရဲ့ထိပ်စာလုံးများကို ယူ၍ ရေးဆွဲဖန်တီးထားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
>>> ဥပမာ : MWD, LG, BBC,….
2. Word-mark logo (Text Logo)
Company နာမည်ကိုပဲ အဓိက focus လုပ်ကာ ဖန်တီးခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခေါ်ဆိုရလွယ်ကူသော ကုမ္ပဏီနာမည်များမှာသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
>>> ဥပမာ : Canon, Nescafe, Google,…
3. Pictorial mark (symbols logo)
Graphic ကို အခြေခံရေးဆွဲခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Logo မျိုး ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
>>> ဥပမာ : Apple logo, Twitter logo,..
4. Abstract mark
Symbols logo နဲ့ တူညီပြီး ကွဲပြားချက်ကတော့ အရောင်ကာလာကို ဆန်းသစ်ပြီး ကျစ်လစ်ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုး ရေးဆွဲရမှာပါ။
>>> ဥပမာ : Pepsi , Adidas, Olympic,….
5. Mascot logo
ဒီ logo မှာဆိုရင်တော့ Character တစ်ခုကို illustrate လုပ်ပြီး ဖန်တီးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Company ရဲ့အရေးပါတဲ့သူ (သို့) Business type တစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြုမည့် အရာမျိုးကို အသုံးပြု ရေးဆွဲရမှာပါ။
>>> ဥပမာ : KFC , Premier League’s Lion logo, Pringles,….
Logo အမျိုးအစား နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုပြီး ပေါင်းစည်းရေးဆွဲထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Icon + Text ကို အပေါ်အောက် (သို့) ဘေးတို့ ယှဉ်တွဲပြီး ရေးဆွဲခြင်းကို​ ခေါ်ပါတယ်။
>>> ဥပမာ : Pizza Hut, Adidas, ….
Symbols မှာ Text ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Emblem Logo ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ မထင်မရှားဖြစ်စေနိုင်မယ့် ဖောင့်အသေးမျိုး မသုံးသင့်ပါဘူး။
>>> ဥပမာ : Starbucks Coffee, NFL, Manchester United,….
ဒီလောက်ဆိုရင် လိုဂိုအကြောင်း စုံစုံလင်လင် သိလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
အကယ်၍ လိုဂိုဒီဇိုင်းကောင်းတွေကို အပ်နှံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Myanmar Web Designer မှ လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့် လိုဂို ဒီဇိုင်းကောင်းများကို ကျွမ်းကျင်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသော ဒီဇိုင်နာများက သေသပ်ကျနစွာ ဖန်တီးရေးဆွဲပေးနေကြောင်းကို သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ပါရစေ။ 💚💙💜
**လုပ်ငန်းအားလုံး Online မှတဆင့် အောင်မြင်စွာချဲ့ထွင်နိုင်ရမည်**